Archdiocese of Mandalay blog: April 2015
ခရီးအရှိန် မဆုံးသေးတဲ့ မီးအိမ်လေး တစ်လုံး (အပိုင်း ၁)
မိခင်စိတ်တဲ့၊ အင်မတန် ထူးဆန်းလှပါဘိခြင်း၊ အံ့သြစရာလည်း ကောင်းလှပါ၏။ စိတ်ပညာရှင်များက မိခင်စိတ်၏ ဆန်းကြယ်မှုကို စမ်းသပ်ခန်းတွင် ကြွက်ဖြူလေးများဖြင့် စမ်းသပ်ကာ သက်သေ ထူခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ဖြူလေးများမှာ လူ့စိတ်နှင့် အနီးဆုံးတူကြသည့် သတ္တ၀ါလေးများ ဖြစ်သည်။ မိခင်စိတ်၏ ဆန်းပြားမှုကို ကြွက်ဖြူလေးများနှင့် အောက်ပါအတိုင်း စမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။
အစမ်းသပ်ခံ ကြွက်ဖြူ အမတစ်ကောင်ကို တစ်နေ့နှင့် တစ်ညခန့် အစာမကြွေးပဲ ထားလိုက်သည်။ သည်တော့ အဲ့သည့် ကြွက်ဖြူအမလေး ဘယ်လောက်ထိ ဆာလောင် မွတ်သိပ်နေမလဲဆိုတာ စဉ်းစားသာကြည့် ပေတော့၊
အချိန်တန်တော့ လှောင်ချိုင့် အတွင်းထဲကို အဆိုပါ အစာအငတ်ခံ ထားသည့် ကြွက်ဖြူမလေးအား ထည့်ထားလိုက်သည်။ အခြား လှောင်ချိုင့်ထဲမှာတော့ အဲ့သည့် ကြွက်ဖြူမလေးရဲ့ ရင်သွေး ကြွက်ပေါက်စလေးကို ထည့်ထားလိုက်သည်။ သည်လှောင်ချိုင့်နှစ်ခုကို လျှောက်လမ်းလေးတစ်ခုဖြင့် ဆက်သွယ် ပေးထားသည်။ ထိုလျှောက်လမ်းလေးသည် လှောင်ချိုင့်နှစ်ခု၏ အပေါက်များနှင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။ သို့သော် ထိုလျှောက်လမ်းကို လျှပ်စစ်ဓါတ် လွှတ်ထားလိုက်သည်။ ထိုအပြင် ကြွက်မကြီးဘက်က လျှောက်လမ်းထိပ် အပေါက်ဝတွင် ကြွက်များ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ဒိန်ခဲလေးတစ်ခုကိုလည်း ချိတ်ထားလိုက် ပြန်သေးသည်။
စမ်းသပ်မှုက သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ရောက်ပါက ကြွက်ပေါက်စလေးကို အပ်အသေးလေးနှင့် ထိုးဆွ လိုက်မည်။ ကြွက်ပေါက်စလေးက နာကျင်သည့် ဝေဒနာကြောင့် အော်မည်။ ထိုအခါ တစ်ဖက်မှာ ရှိတဲ့ မိခင် ကြွက်မကြီး ဘာလုပ်မည်နည်း၊-ဆာလောင် မွတ်သိပ်လွန်းလို့ ဒိန်ခဲကိုပဲ အငန်း မရ စားမလား၊ သို့တည်းမဟုတ် တဖက်လှောင်ချိုင့်ထဲက မိမိရင်သွေး၏ စူးစူး ၀ါးဝါး ငိုကြွေးသံကြောင့် ဒိန်ခဲ့ကို စွန့်ပြီး ရင်သွေးထံ ပြေးသွားမလား- သည် ကြွက်မကြီး၏ ရွေးချယ်မှုကို စမ်းသပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းကြွက်မကြီး ဘယ်အရာကို ရွေးချယ်မည်နည်း၊ စိတ်ဝင်စားစရာပင် ဖြစ်သည်။
မိမိ ရင်သွေး၏ ငိုသံကြောင့် တစ်ဖက်လှောင်ချိုင့်စီ အပြေးသွားမည် ဆိုပါက လျှပ်စစ် လွှတ်ထားသော လျှောက်လမ်းကို ဖြတ်ရမည်။ ထို့ကြောင့် ဓါတ်လိုက်မည်။ ရင်သွေး ငိုသံကို ဥပက္ခာပြုကာ ဆာလောင် မွတ်သိပ်မှုကြောင့် ဒိန်ခဲကို စားမည်ဆိုက ဘာမှ အန္တရယ်မရှိ၊ အေးဆေးပဲ၊
ဒါပေမယ့် ကြွက်မကြီးသည် မိမိရင်သွေးထံ သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံ ရသည်။ လျှောက်လမ်းပေါ် ပြေးတက်တိုင်း ဓါတ်လိုက်လို့ နောက်ပြန်လန်လန် ကျသွားခဲ့ရသည်။ ဒါကို သူမှု ပုံမရ၊ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့သည်။ တကယ်တော့ သည်ကြွက်မကြီး ဆာလောင် မွတ်သိပ်နေလှပြီ၊ သို့သော် ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့် မိခင်စိတ်တို့ လွန်ဆွဲကြရာ၊ မိခင်စိတ်က အနိုင်ရလိုက်ပါတော့သည်။ ဤျသည်ပင်လျှင် မိခင်စိတ်၏ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံလို စိတ်ကို ဆာလောင် မွတ်သိပ်မှုက အနိုင် မယူနိုင် ဆိုသည်ကို သက်သေပြနေပါသည်။
မိခင်စိတ်ဟူသည် လူနှင့် တိရိစ္ဆာ မကွာခြင်းလှပါ။ တချို့ တချို့သော တိရိစ္ဆာများသည် မျက်ရည်ကျတတ်ကြ၏ဟု ဆိုကြပါသေးသည်။
အဖ ဆရာတော်ကြီး ပေါလ်ဇိန်ထုန်းဂရောင် အသက်(၁၁)နှစ် အရွယ်တွင် ဗန်းမော်သို့ ပညာသင်ရန် ရောက်လာသည်။ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဇိန်ထုန်း ဂန်- ကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့ ခြင်းဖြစ်သည်။ အစ်မတစ်ယောက်နှင့် နှမတစ်ယောက်တို့လည်း ပါကြသည်။ ဦးဇိန်ထုန်းဂန်အဖို့ကား သမီးနှစ်ယောက်နှင့် သားတစ်ယောက်ကို ရပ်ဝေးသို့ ပို့ထားလိုက်ရမည် ဆိုတော့လည်း အတော်ပင် ခံစား ရပေမည်။ သည်သား -သည်သမီးကို နောက်ဆုံးတွေ့ရခြင်း ဆိုသည်ကိုတော့ မည်သူမှ သိကြမည် မဟုတ်ချေ၊
အကြောင်းမှာ ဆရာတော်ကြီးတို့ မောင်နှမသုံးဦးကို ဗန်းမော် ဘုန်းကြီးကျောင်း- သီလရှင်ကျောင်းသို့ မေလဆန်းက ပို့ခဲ့သော ဦးဇိန်ထုန်း ဂန်သည် ဂျွန်လဆန်းတွင် သေဆုံးသွားခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။-
ရွှေတောင်ကြီး ပျိုပြီ ဟု ဆိုရမလို ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒေါ်လဇုန်ထုအဖို့မူ ခင်ပွန်းသည် မရှိတော့သော်လည်း အားမငယ်ပါ။-တက်မရှိရင် လက်နှင့် လှော်မည်ပေါ့၊ ပန်းတိုင်ကိုတော့ လှမ်းကိုင်နိုင်ဖို့သာ အဓိက မဟုတ်ပါလော့၊ သူတို့အဖေ ဖြစ်စေချင်သော သာသနာပြု သူတော်စင်များ ဖြစ်အောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားမည်။
ဟုတ်ပါသည်။ ဖခင် ဓမ္မဆရာကြီး ဦးဇိန်ထုန်းဂန် အနေဖြင့် မိမိ ရင်သွေးများကို သာသနာပြု သူတော်စင်များ ဖြစ်စေချင်သည်က အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့မို့ကြောင့်ပင် မိမိ မျက်စိမမှိတ်မီ လပိုင်းအလို၊ မိမိ၌ ဝေဒနာများ ခံစားနေရသည့်ကြားက မိမိ ရင်သွေးသုံးဦးကို ဗန်းမော်သို့ ပို့ဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သည်အချက်ကို ဇနီးကောင်းပီပီ ဒေါ်လဇုမ်ထု သိသည်။ ဦးဇိန် ထုန်းဂန် က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသမား၊ ဘာမှ ထိန်ချန် မထားတတ်၊ သူမှားရင်လည်း မှားတယ် ၀န်ခံဖို့ မနှောင့်နှေးတတ်၊ ရင်ထဲမှာ ဘာဆို ဘာမှ ထိန်ချန် မထားတတ်ပါ။ အခုကိစ္စလည်း ဒေါ်လဇုန်ထု သိသည်။ မိမိ ခင်ပွန်းသည် မကျန်းမာသည့်ကြားက သားနဲ့ သမီးနှစ်ဦးကို ဗန်းမော်ပို့သည်ကို သိနေသည်။ သိဆို သူနဲ့ ပေါင်းသင်းလာတာ အခုဆို သားသမီး ခုနှစ်ဦး၊ တစ်ဦးက ရင်မှာ လွယ်ထားနေရဆဲ၊-
အခုတော့ မိမိ ခင်ပွန်းမရှိတော့သည့် လုံခပ်ရွာလေးတွင် ဆက်မနေချင်တော့၊- ထို့ကြောင့်လည်း ခင်ပွန်းသည် တိမ်းပါးပြီး များမကြာမီမှာပင်၊ ဗန်းမော်နှင့် ၁၅ မိုင်ခန့်သာ ဝေးသည့် မြစ်ကြီးနား-ဗန်မော် လမ်းမကြီး ပေါ်က ဆယ့်ငါးမိုင် အမည်ရသည့် ရွာကြီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ရွာ မပြောင်း-သူကောင်းမဖြစ်ဟု ဆိုထားသည် မဟုတ်ပါလား၊ ကလေးရှစ်ယောက် အမေ၊ ကလေးတွေ ကျောင်းစရိတ်၊ စားစရိတ်၊ ပညာရေးစရိတ်တွေ ပုံမှန် ပို့နိုင်ဖို့က အရေးကြီးနေမည်သာ ဖြစ်သည်။ ဒါမှလည်း မိမိ ရင်သွေးများ သူတကာအကြား မျက်နှာငယ်ရမည့် အဖြစ်မျိုးနှင့် ဝေးမည်သာတည်း၊
ဒေါ်လဇုမ်ထု တစ်ယောက် ကလေးတွေကို ချစ်ပုံ၊ သံယောဇဉ်ကြီးပုံက အတုယူစရာ ကောင်းလှပါသည်။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်လို့ ကလေးတွေ ဗန်းမော်က ပြန်လာရင် မြူးနေတော့တာပါပဲ၊ အထူးသဖြင့် သူအပျော်ဆုံးနဲ့ အကြည်နူးဆုံး အချိန်တစ်ခုရှိသည်။ ကလေးတွေ ကြိုက်တတ်တဲ့ စားစရာတွေ ချက်ပြီး မိသားစု ၀ိုင်းဖွဲ့ စားသောက်တဲ့ အချိန်ပေါ့၊
မိမိ ခင်ပွန်းမရှိသည် နောက်ပိုင်းသည် ကလေးတွေကို ဖခင်လို တစ်မျိုး- မိခင်လို တစ်ဖုံနဲ့ ပြုစုခဲ့သည်။ ကလေးတွေကလည်း လိမ္မာကြပါသည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ လျှောက်လည်လိမ့်မရှိ၊ အိမ်မှု ကိစ္စအ၀၀ကို မိခင်အား ကူညီလိုက်- ဖခင်စာအုပ်စင်က ဘာသာရေး စာပေတွေကို ဖတ်လိုက်နဲ့ နွေရာသီ အားလပ်ရက်ကို အကောင်းဆုံး အသုံးချတတ်ကြသည်။
ဆရာတော်ကြီး ပေါလ်၏ ဖခင်သည် ဓမ္မဆရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သားသမီးတို့၏ ဘာသာရေး မျိုးစေ့များမှာ ဖခင်ထံမှ ကူးစက်ခဲ့ဟန် တူသည်။ သားသမီးတို့၏ ဘာသာရေး ခံယူချက်များနှင့် ယုံကြည်ချက်များကိုတော့ မိခင်က ရေလောင်း ပေါင်းသင်ပေးခဲ့ပုံရသည်။ သားသမီးတို့၏ ဘာသာရေး ခံယူချက်များမှာ ရေခံ မြေခံကောင်းခဲ့သည့် အတွက် အရာရာကို ဘုရားထံ အပ်နှံနိုင်သည့် မြင့်မြတ်သော စိတ်ထားများကို ပိုင်ဆိုင်နေကြသည်။ တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်သော သားသမီး ရတနာလေးများ ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။
ကလေးတွေ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ချိန်သည် မိခင်ကြီး၏ နှလုံးသားကို နာကြင်စေမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်မည်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ငှက်ကလေးများ အဝေးသို့ ပျံသန်းသွားကြမည် ဖြစ်သောကြောင့်ပင်၊
ထိုနေ့မျိုးဆိုရင် ဒေါ်လဇုမ်ထု တစ်ယောက် နံနက် စောစောထမည်။ ကလေးများအတွက် အပြန်ခရီးတွင် လိုရာများ ထည့်ပေးမည်။ လမ်းတွင် စားမည့် နေ့လယ်စာကို ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်ပေးမည်။ အခြား ကိုယ်ခွဲမှ မရှိတာ၊ ပြီးတော့-ကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့မည်။ မိမိတို့ ရွာသည် ဗန်းမော်နှင့် ၁၅ မိုင် ဝေးသည်။ ထိုခရီးကို ဆရာတော်ကြီးပေါလ်တို့ မောင်နှမ (၉၆၉၃)နှင့် လာကြ-သွားကြရသည်။ (၉၆၉၃)ဟု ဆိုလိုက်သဖြင့် အငှားကား နံပါတ်ဟု ထင်တော်မမူလိုက်ကြပါနှင့်။ ကိုယ့်ခြေကိုသုံးပြီး ခြေလျင် သွားကြ-လာကြ ရခြင်း ကို ဆိုလိုပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံက သမ္မတကြီး အာဗြံလင်ကွန်း၏ ဘ၀ အထုတ္ထုပ္ပတ္တိထဲတွင် သစ်လုံးအိမ်တွင်နေပြီး နေ့စဉ် (၇) မိုင်ခရီးကို ခြေလျင်သွားပြီး ကျောင်းတက်ခဲ့ရသည်ဟု မှတ်သားရပါသည်။
ယနေ့ခေတ် လူငယ်များ အတုယူစရာပင်။ စာသင်ကျောင်းသွားဖို့ နေ့စဉ် မုန့်ဘိုးတောင်းကြ၊ စက်ဘီး ပူစာကြ၊ ဆိုင်ကယ် ပူစာကြ၊ လက်ပတ်နာရီ ပူစာကြ၊ ဟင်းဖုန်း ပူစာကြ၊ ကွန်ပြူတာ ပူစာကြ၊ စာက ဘယ်ဆီ ဘယ်ဝယ်မှန်း မသိသေး၊ အရင်းအနီးက များပါဘီ၊
ကျောင်းသားများ သာမက- ယနေ့ခေတ် မိခင်များလည်း အတုယူသင့် သည်။ မိမိတို့ ကလေးအတွက် အချိန် မပေးနိုင်ကြ၊ အားလပ်ချိန်မှာ ကလေးတွေ ရှေ့ ချဲတွက်၊ နှလုံးထီ ထိုးနေကြခြင်းသည် လမ်းကောင်းပြနေသည်ဟု ပြောနိုင်ပါ့မလား၊ ဒေါ်လဇုမ်ထုကတော့ အားလပ်ချိန်မှာ မိမိတို့ အုပ်စု၏ မိခင်အသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ ပီပီ တစ်အိမ်တက်ဆင်း စိပ်ပုတီးစိပ်လိုက်ရ၊ ဆုတောင်း ပွဲလုပ်လိုက်ရ၊ သည်ကြားထဲ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး၏ အကူအညီ တောင်းခံမှုတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးရနှင့် အားချိန် မရှိခဲ့ပါ။ သည်ကြားထဲ ကလေးများနှင့် မန်မန်အတူတောင် စားလိုက်သေး၊ အချိန် အသုံးပြုတတ်ပုံများ အတုယူစရာ၊
ကျောင်းပြန်ကြမည့် ကလေးတွေအတွက် လိုအပ်သည်များကို ပြင်ဆင်ပေးယုံနှင့် အားမရသေး၊ ကလေးတွေနှင့် အတူ လိုက်ခဲ့ လိုက်သေးသည်။ နေ့တစ်ဝက်ကျိုးလို့ နေ့လယ်စာ စားချိန်ရောက်တော့ ကလေးတွေကို ခူးခပ်ယူလာသည့် ထမင်းဟင်းများကို ကျွေးလိုက်သေးသည်။ ပြီးတော့ ခရီးဆက်သည့်အခါမှာတော့ သူ မလိုက်တော့ချေ၊ သည်အခါမှာ ခရီးက တစ်ဝက် ကျိုးနေပြီ၊ ကလေးများ ဗန်းမော်သို့ ခရီးဆက်သည့်အခါ ဒေါ်လဇုမ်ထုက လှည့် မပြန်သေး၊ မိမိရင်သွေးများ၏ ကျော်ပြင်ကို နောက်ကနေ ကြည့် နေလိုက်သည်မှာ မိမိ မျက်စိမြင်ကွင်း အဆုံးထိပင်ဖြစ်သည်။ ရင်သွေးများကလည်း သမင်လည်ပြန်နှင့် သူ့ကို လှည့်ကာ လှည့်ကာ ကြည်မည်။ မိခင် ဖြစ်သူကလည်း လက်ဝှေ့ရမ်း ပြကာ ပြကာနှင့် တော်တော်နဲ့ နောက်လှည့် မပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ သည်မြင်ကွင်းမျိုး ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြပါက မည်သူမငိုပဲ နေပါမည်နည်း။ အောက်ထစ်တော့ မျက်ရည်စို့လာမည်ကိုတော့ အာမခံသည်။
ဗန်းမော်ထိ (၁၅) မိုင်ဆိုတော့၊ (၇)မိုင် ခရီးသည် တစ်ဝက်ဖြစ်မည်။ ထိုခရီး တစ်ဝက်ကို ဒေါ်လဇုမ်ထု တစ်ဦးထဲ ပြန်ရမည်။ အပြန်ခရီးသည် မြန်နိုင်အုံးမည်လား၊ ပျော်နိုင်အုံးမည်လား။
သိပ္ပံပညာရှင်များက "အချိန်"၏ မြန်နှုန်းကို ဤသို့ဆိုကြသည်။ လူတစ်ဦးသည် အကွာအဝေး တူညီသော ခရီးတစ်ခုကို သွားရာ၌ ချောမော လှပသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် အတူသွားခြင်းနှင့် အကျည်းတန် ရုပ်ဆိုးအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် အတူသွားရခြင်းတွင် အချိန်၏ ကြာမြင့်မှုမှာ မတူနိုင်ဟု ဆိုကြ၏။ လှပသော အမျိုးသမီးနှင့် အတူသွားရာ၌ အချိန်သည် တိုးတောင်းလှ၏ဟု အထင်ရှိသော်လည်း အကျည်းတန် ရုပ်ဆိုးအမျိုးသမီးနှင့် အတူသွားရသည့် အခါ ခရီးအကွာအဝေး တူညီနေသည့်တိုင် စိတ်ထဲမှာ အချိန်က ကုန်ခဲလိုက်တာ-ကြာလိုက်တာ-ဟု တင်ကြမည်ဟု မှတ်ချက် ပြုထားပါသည်။
ထို့အတူ ဒေါ်လဇုမ်ထု၏ ကလေးများ မပါသော အပြန် ခရီးကား ဝေးနေမည်။ ကြာနေမည်ဟု ခံစားရနေပေမည်။ အလာတုန်းက ခြေလှမ်းများ သွက်သလောက် အပြန်ခရီးတွင်တော့ ခြေလှမ်းတိုင်း လေးနေမည်။ နှေးနေမည်ကတော့ သေချာ လှပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ဆရာတော်ကြီးနှင့် နှစ်အတော်အတန် ကြာနေထိုင် ခွင့်ရခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ အထက်က မိခင်ကြီး၏ အလေ့အထကောင်း တစ်ခုကိုတော့ဖြင့် ဆရာတော်ကြီးက အမွေ ဆက်ခံနိုင်ခဲ့သည့်ဟု ယုံကြည်သည်။ အကြောင်းမှာ ဆရာတော်ကြီးထံ လာရောက်သူများကို ဧည့်ခံရာ၌ မိခင်က နေ့လယ်စာကျွေးသကဲ့သို့ ဧည့်ခံရမည့် တာဝန် အားလုံးကိုလည်း ဆရာတော်ကြီးက လုပ်ဆောင်သည်။ ဧည့်သည် ပြန်တော့ ဂိတ်ပေါက်ထိ ၊"ကား"နား အထိ လိုက်ပို့မည်။ လိုအပ်ပါက"ကား"တံခါးတောင် ဖွင့်ပေးလိုက်အုံးမည်။
ဒါ့ကြောင့် "အမွေ"ဆိုသော ကဗျာလေးဖြင့် ဒေါ်လဇုမ်ထုကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။
ဖန်မီးအိမ်ကို မည်သူ မီးညှိ ပေးလိုက်သနည်း။
မှတ်သားစရာ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို မျိုးကြဲသူစာစောင် အတွဲ (၉၄)၊ အမှတ်(၁)၊၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလထုတ် စာစောင်တွင် အောက်ပါ အတိုင်း လေ့လာ မှတ်သားခဲ့ရပါသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘက်နာဒစ် (၁၆) အသက် (၇) နှစ်အရွယ်က သူငယ်တော်ယေဇူးထံသို့ ရေးသားသော ခရစ်စမတ်ကဒ်တွင် ယေဇူးရွှေနှလုံးတော်ကို သဒ္ဓါကြည်ညိုခြင်းနှင့် ရဟန်းဖြစ်လိုသော ဆန္ဒကို တွေ့ရပေမည်။
သူ၏ စာတွင် "ကြည်ညိုလေးစားအပ်ပါသော သူငယ်တော် ယေဇူး၊ ကမ္ဘာပေါ်သို့ အမြန်ဆုံး ကြွလာတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်သည် ကလေးများကို ပျော်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်၊ သားကိုလည်း ပျော်အောင် ပြုလုပ် ပေးတော်မူပါ။ သားလိုချင်တဲ့ အရာများဟာ မစ္ဆားတရားနာယူတဲ့ စာအုပ်လေးရယ်။ တရားထောက် သင်္ကန်းရယ်၊ ယေဇူးရွှေနှလုံးတော်ပုံတော်လေးရယ် ဖြစ်ပါတယ်၊"လို့ ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသည် ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် အခြားသော ကလေးများကဲ့သို့ ကစားစရာများ၊ စားစရာများနှင့် အင်္ကျိလှလှလေးများကို မပူစာာခဲ့၊ ဤအချက်ကပင် ထူးခြားလျက် ရှိနေပါတော့သည်။
ဆရာတော်ကြီးတို့ မောင်နှမ(၃)ဦး ဗန်းမော်တွင် ဘော်ဒါနေကြသည်။ ဆရာတော်ကြီး ပေါလ်က စိန်ကိုလန်ဘန် ဘော်ဒါ၊ အစ်မနှစ်ယောက်က အာဗေမာရီယားလို့ အမည်တွင် ဖရန်စစ်ကင်သီလရှင်ကျောင်းတွင် ဘော်ဒါနေသည်။
မောင်နှမတစ်တွေ ဘောဒါနေစဉ် စာ ကြိုးစားကြသည်။ လိမ်မာ ကြသည်။ ယဉ်ကျေးကြသည်။ ရဟန်းသီလရှင်တို့ စကား နားထောင်ကြသည်။ စာတွေ ဖတ်ကြသည်။ ဆုတွေ တောင်းကြသည်။ သူတို့၏ ဆုတောင်းသံများထဲတွင် ရဟန်းဖြစ်ရန် သီလရှင်ဖြစ်ရန်က များနေမှာတော့ သေချာလှပါသည်။
တစ်နေ့တွင်၊ ဟုတ်ပါသည်၊ ထိုနေ့ကို ဆရာတော်ကြီးပေါလ် တစ်သက် မေ့လို့ရတော့မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုနေ့က စိန်ကိုလန်ဘန်ဘောဒါ ကျောင်းအုပ် ဘုန်းတော်ကြီး ဖာသာပက်ထရိတ်မက်ဒင် (Fr.Patrick Madden) က သူ့ ရုံးခန်းသို့ လာရန် လူကြုံပါးလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာတော်ကြီးပေါလ်က ဘုန်းတော်ကြီး၏ ရုံးသို့ သွားရောက်ခဲ့၏။ ထိုအခါ ဘုန်းတော်ကြီးက သင် အောက်ပြည်သို့ သွားရမည်။ ပညာသင်ရမည်။ ဘုန်းကြီး လုပ်ရမည်ဟု ဆိုလာသည်။
(၁၃) နှစ်သားလေး ပေါလ်မှာ ဘာမျှ အသေအချာ နားလည်နိုင် စွမ်းမရှိသေး၊ သို့သော် သူ့မိဘများက သွန်သင် ဆုံးမခဲ့သည်၊ ရဟန်းများ သီလရှင်များ စကား နားထောင်ရမည်ဟူတည်း။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းအုပ် ဘုန်းတော်ကြီး၏ စကားကို ခေါင်းညိတ်ခဲ့သည်။
ရဟန်းဘ၀သို့ ခေါ်တော်မူခြင်းကား ဆန်းကျယ်ပါဘိ၊ ရှုထောင့်မျိုးစုံကို အသုံးပြုပြီး ဘုရားသခင်သည် ခေါ်တော်မူခဲ့သည်။ တချို့ကိုတော့ ရဟန်းဘ၀ဆိုတာကို သိလို့ မြတ်နိုးလို့ ရဟန်းဘောင်သို့ ၀င်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တချို့အတွက် ကတော့၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် အဖေါ်ကောင်းလို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ရောက်လာကြသည်။ တချို့ကတော့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းက ဟင်းကောင်းမှာပဲ အထင်နဲ့ ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ အခုကြည့် ဆရာတော်ကြီးပေါလ်.. ရဟန်းဆိုတာ ဘာမှ ကောင်းစွာ နားမလည်၊ သို့ သော် "နားထောင်"ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ကလေးတစ်ခုနှင့် ရဟန်းဘောင်သို့ ရောက်လာသည်။
ထို့ကြောင့် ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် မိုးကုတ်သို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ မိုးကုတ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်က ပန်ပေါက် ကျောင်းထိုင်အဖြစ် တာဝန်ယူနေရသော ဘုန်းတော်ကြီး ကာရိုလုစ် ဦးထွန်းဝင်း (Fr.Carolus U Tun Win) က အင်္ဂလိပ်စာကို သင်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြန်မာစာကိုတော့ မိုးကုတ်တွင် နေထိုင်သော ဆရာမောင်မောင်နှင့် ဆရာဦးဘသွင် တို့က သင်ပေးခဲ့ကြသည်။ သည်ဆရာများ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကား ကြီးမားလှပါဘိ၊
ယခု ပြင်ဦးလွင်တွင်ရှိ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း၏ ကျောင်းဝင်မှတ်ပုံတင် စာအုပ် အရ ဆရာတော်ကြီးပေါလ်သည် ၁၉၅၃ ခုနှစ် မေလ (၅) ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဆရာတော်ကြီးသည် ပြင်ဦးလွင် စိန်အလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင် ကျောင်းတွင်လည်း စာကြိုးစားသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ စာသင်ကျောင်း သွားရင်တောင် စာအုပ်နှင့် မျက်နှာမခွာခဲ့။ လမ်းသွားရင် စာဖတ်ခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ပြင်ဦးလွင် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းရှိ ဘောလုံးကွင်းမှ မြက်ပင်လေးများပင် မှတ်မိနေကြပေမည်။ စာသင်ကျောင်း သွားပါက ယင်း ကစားကွင်းကို ဖြတ်ရပါသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ဆရာတော်ကြီးသည် မျက်မှန်ထူထူကြီးကို ထိုစဉ်ကတည်းက တပ်ခဲ့ရပါသည်။ မျက်မှန်ပါဝါလည်း မတိုးခဲ့သလို ပါဝါလည်း လျှော့ခဲ့ပါ။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်း စာမေးပွဲကို နှစ်ချင်းပေါက် အောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၇ မှ ၁၉၅၈ မတ်လအထိ လာတင်းဘာသာကို ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် ဆက်လက် သင်ကြားခဲ့သည်။
ထိုမှ တဆင့် ၁၉၅၈ ခုနှစ် မတ်လ (၂၅)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုမှ တဆင့် ၁၉၆၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ရဟန်းသိက္ခာကို ခံယူခဲ့သည်။
ကချင်လူမျိုးစုနွယ်များ အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဆရာတော်ကြီး ပေါလ်သည် ကချင်လူမျိုးစုနွယ်များထဲက ပထမဦးဆုံးသော ကက်သလစ် ရဟန်းတစ်ပါး အဖြစ် သမိုင်း မှတ်တိုင်တစ်ရပ်ကို ထူနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်ကြီး ပေါလ်သည် ရဟန်း သိက္ခာခံယူပြီးနောက် မိုးမောက်မြို့တွင် လက်ထောက် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ (၁၉၆၆)ခု မတ်လမှ (၁၉၆၈) မတ်လအထိ ဗန်းမော်မြို့ ကိုလန်ဘန်ဘော်ဒါကျောင်းတွင် ကျောင်းအုပ်အဖြစ်လည်း အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်(၁၉၆၈) မေလမှ (၁၉၇၄) မတ်လအထိ ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်တွင် ၀ိညာဉ် လမ်းညွှန်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းခဲ့သည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 7:53 AM
ပယ်ရ်ကိုတိုသည် မြန်မာစာပေကို ရသမြောက်စွာ လေ့လာခဲ့ရသော်လည်း မြန်မာစာပေသည် လက်ရေးမူ လောကတွင်သာလျှင် ကျင်လည်နေရသေးကြောင်းကို မိမိ မနှစ်မခြိုက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိ မြတ်နိုးသော မြန်မာစာပေကို ကမ္ဘာ့စာပေနှင့် ရင်ဘောင်တန်း၍ ပုံနှိပ်လောက စင်မြင့်ပေါ်သို့ တင်ဆောင်ပေးလိုသော ဆန္ဒများ ပြင်းပြခဲ့သည်။ သို့သော် အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်ပေးရန်မှာ အချိန်စောသေး၏။
ဘုန်းတော်ကြီး ပယ်ရ်ကိုတို ဆရာတော် သိက္ခာခံယူခြင်း
ဤတိုင်းပြည်မှာ ကျွန်ုပ် တွေ့ကြုံ ရင်ဆိုင်ရသော အခက်အခဲအားလုံးကို ခံနိုင်ရည်စွမ်း အပြည့်အ၀ဖြင့် ကျော်လွှား လျှောက်လှမ်း နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ် အပြင်းအထန်
ခံစားနေရသော အလွန်ကြီးမားသည့် ဝေဒနာတခုကတော့ ကျွန်ုပ်တစ်ပါးတည်း အဖေါ်မဲ့ နေထိုင်ရသော ဘ၀ ဖြစ်ပါသည်။ (၂၃) ကျွန်ုပ်သည် အရည်အချင်း ပြည့်စုံတဲ့သူရယ်လို့တော့ မဆိုလိုပါ။ သို့ပေမဲ့ ကျွန်ုပ်များ သေဆုံးသွားမည် ဆိုလျှင်၊ ဘာသာရေး ပေါ့ပျက်နေတဲ့သူတွေ အတွက် ဤထက်မက ပိုမို ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ဆိုက်ရောက်သွားမှာကို ကျွန်ုပ် အမြဲ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျနေမိခဲ့သည်။ ----- ကျွန်ုပ်မှာ နဂို ကျမ်းမာရေးက မခိုင်တဲ့အကြား၊ ဤထက် ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတခုခု ၀င်လာမှာကိုပင် ပူပန်ရသည့် အတွက် သာသနာလုပ်ငန်းများ ထမ်းဆောင်နေရာတွင် အထူးပင် ဂရုစိုက် ချင့်ချိန်ပြီး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေရပါသည်။ (၂၄)
အထက်ပါ ဘုန်းတော်ကြီး ပယ်ရ်ကိုတို ရေးသားပေးပို့သော စာများသည် ဘုန်းတော်ကြီး၏ အတွင်းစိတ်သားများကို ပေါ်လွင်စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြသခြင်း ဖြစ်သည်။ မိမိ အသက်ကို ပဓာနမထားပေမဲ့ မိမိ ကွယ်လွန်သေဆုံးပါက သာသနာလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်သွားမည်ကို အထူး စိုးရိမ်ကြောင့်ကျနေကြောင်း အထင်အရှား ဖွင့်ဟ ထုတ် ဖေါ်ခဲ့သည်။ ဖြည့်ဆည်း လုပ်ဆောင်ရသော သာသနာလုပ်ငန်းများ သည်လည်း အလွန် ကျယ်ပြန့်လှသည်။
လုပ်အား အမျှတ၍လည်း အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ မဟာ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ပယ်ရ်ကိုတို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေသော သာသနာလယ်ကွင်းပြင်လေးသည် စိမ်းလန်း စိုမြေရှင်သန် တိုးတက်လျက်လာခဲ့သည်။ နွေမိုဆောင်း ဥတုရာသီ သုံးပါးအလိုက် အနည်းနှင့်အများ မသွေ့မခြောက် စီးဆင်းနေသည့် စမ်းရေပမာ မြန်မာပြည် သာသနာမြေသည်လည်း တရားတော် မေတ္တာရေများ အေးမြ ကြည်လင်စွာ စီးဆင်းလျက်ရှိခဲ့သည်။
သက္ကရာဇ် ၁၇၆၇ ခုနှစ်သို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်။ အီတလီပြည် ရောမမြို့တော်ကြီးမှ မြန်မာပြည်အတွက် သာသနာပြု ပုဂိုလ်(၅)ပါး အထုပ်အပိုးများ ထုပ်ပိုးလျက် ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး။ မြန်မာပြည် ဘားရ်နဘိုက် သမိုင်းတွင် မကြုံစဖူး အင်အား အတောင့်တင်းသော အဖွဲ့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သာသနာပြု ပုဂိုလ် (၅)ပါး၏ အမည်စာရင်းမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။
(၁) ဘုန်းတော်ကြီး မယ်လ်ခီယို ကာရ်ပါးန
Rev.Fr. Melchior Carpani
(၂) ဘုန်းတော်ကြီး အန်တိုးနီယို ဖီလိဘယ်ရ်တိုရေ
Rev.Fr. Antonio Filiberto Re
(၃) ဘုန်းတော်ကြီး ဂေရားဒို ကော်တင်းနိုးဗစ်
(၄) ဘုန်းတော်ကြီး အမ်ဘရိုဇေ မီကောနီ
Rev. Fr. Ambrose Miconi
(၅) ကိုရင်ကြီး ရေမုအဒ် ဘယ်ရ်ဂွန်းဇီ
Rev. Fr. Brother Romuald Bergon
အဆိုပါ သာသနာပြု အဖွဲ့ (၅)ဦးသည် သင်္ဘောရရှိရန် အခက်အခဲများနှင့် တွေ့ကြုံ ရင်ဆိုင်ရသဖြင့် အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ခွဲခါ အီတလီပြည်မှ ထွက်ခွာ ခဲ့ကြရသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီနှင့် ဖီလိဘယ်ရ်တုိုရေတို့သည် ပထမသင်္ဘောဖြင့် ၄င်း၊ ကျန်ရှိသော သာသနာပြု (၃)ပါးတို့မှာ ဒုတိယသင်္ဘောဖြင့် ၄င်း၊ အသီးသီး အီတလီပြည်မှ ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ အီတလီပြည်မှ ရောက်ရှိလာကြသော ဘားရ်နားဘိုက် အဖွဲ့ဝင် (၅)ပါးတို့သည် စွမ်းအင်များ ကုန်ခမ်း ခြောက်သွေ့လျက်၊ မှိတ်ကွယ်လုရှိနေပြီဖြစ်သော မြန်မာပြည် ကက်သလိခ်သာသနာ မီးရှုး တန်ဆောင် ကလေးကို လောင်စာဆီများ ထည့်သွင်းပေးလိုက် သကဲ့သို့ ပြန်လည် တောက်လောင်နိုင်သော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိ သွားစေခြင်း ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် အဆိုပါ ဘားရ်နားဘိုက် အဖွဲ့ဝင် (၅) ပါးနှင့်အတူ မြန်မာပြည် ကက်သလိခ်သာသနာတော်အတွက် အထူးအရေးပါသော စာချွန်လွှာ တစ်စောင် ရောမမြို့၊ သာသနာပြန့်ပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာနချုပ်မှ ထည့်ပါးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစာချွန်လွှာတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက မြန်မာပြည်တွင် သီတင်းသုံးနေသော ဘုန်းတော်ကြီး ပယ်ရ်ကိုတိုအား ဆရာတော်အဖြစ် ရွှေးချယ် တင်မြောက်လိုက်ကြောင်း ပါရှိသည်။ မြန်မာပြည် ကက်သလိခ်သာသနာ ရေးရာများကို ခရေစေ့တွင်းကျ သိမြင် နားလည်၍ သာသနာအကျိုးကို စွမ်းစွမ်းတမံ သယ်ပိုး ထမ်းရွက်နေသော ပုဂိုလ်အား၎င်း၊ သာသနာ၏ သိုးထိန်းအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ခြင်းသည် ဘာသာဝင်များနှင့် သာသနာတခုလုံးအတွက် အထူး ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ရာ သတင်းကောင်း တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော ဘားရ်နားဘိုက်များမှ ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီသည် "အပြစ်မဲ့ သန္ဓေယူသော သခင်မဘုရား ရှိခိုးကျောင်း" တွင် ကျောင်းထိုင်အဖြစ် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ဖိလိဘယ်ရ်တိုရေသည် အထက် မြန်မာပြည်သို့ ခရီးထွက်လာပြီး ဘုန်းတော်ကြီး ပယ်ရ်ကိုတိုအား တွေ့ဆုံ၍ အီတလီမှ သယ်ဆောင်လာခဲ့သော သတင်းစုံကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘုန်းတော်ကြီး ပယ်ရ်ကိုတိုအား ဆရာတော်အဖြစ် ရွှေးချယ်တင်မြောက် လိုက်သော်လည်း ဘုန်းတော်ကြီး အတွက် ဆရာတော် ဘိသိတ်ခံယူရန် အခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ ကက်သလိခ် အသင်းတော် ၀ိနည်းဥပဒေ အရ ကက်သလိခ် ဆရာတော်တစ်ပါး ခန့်အပ်မှုကိုရောမမြို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးထံမှ ခန့်စာကို တိုက်ရိုက် ပေးအပ်ရသည်။ ဒုတိယ လိုအပ်ချက်မှာ ၄င်း ရွှေးချယ်ခံရသော ရဟန်း ဘုန်းတော်ကြီးအား အခြား ဆရာတော် သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော်တပါးပါးမှ ဘိသိတ်ပေးရခြင်း ဖြစ်သည်။ ပယ်ရ်ကိုတိုမှာ ခန့်အပ်စာ လက်ခံရရှိသော်လည်း မိမိအား ဆရာတော် ဘိသိတ်ပေးရန် အခြား ဆရာတော်တပါးကို လိုအပ်လာခဲ့သည်။ သက္ကရာဇ် ၁၇၆၇ ခုနှစ်တွင် ဆင်ဖြူရှင် မင်းတရားကြီးသည် ယိုးဒယားသို့ စစ်ချီ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ၁၇၆၇-ခုနှစ် မတ်လ (၂၀)ရက်နေ့တွင် ယိုးဒယား အယုဒ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓယမြို့တော်ကို တိုက်ယူ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ အယုဒ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓယမြို့တော်ကို ဖျက်သိမ်း၍ ယိုးဒယားပညာရှင်များကို မြန်မာပြည်သို့ စစ်သုံ့ပန်းအဖြစ် ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ယိုးဒယား စစ်သုံပန်းအုပ်စုတွင် ယိုးဒယားပြည် ကက်သလိခ် သာသနာပိုင်ဖြစ်သူ ပြင်သစ်ပြည် ပါရီမြို့မှ နိုင်ငံခြား သာသနာပြုအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်ကြီး ပီအဲ ဘီဂေါ့ Bishop piere Brigot လည်း ပါရှိခဲ့သည်။ (၂၅)
သက္ကရာဇ် ၁၇၆၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၃၁)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်သာသနာ၊ အပြစ်မဲ့ သန္ဓေယူသော သခင်မ ဘုရားကျောင်းတော်၌ မြန်မာပြည် အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူး ဧည့်သည်တော် သူတော်စင်များ စည်ကားလျက်ရှိသည်။ ထိုနေ့သည်ကား ဘုန်းတော်ကြီး ဂျွန်မေရီပယ်ရ်ကိုတိုအား ဆရာတော် ဘိသိတ် မင်္ဂလာပေးမည့် အခမ်းအနားကျင်းပသည့် မင်္ဂလာရက်မြတ် ဖြစ်သည်။ (၂၆)ဘုန်းတော်ကြီးကာရ်ပါးနီနှင့် ဘုန်းတော်ကြီး အမ်ဘရိုဇေမီကောနီတို့သည် ယိုးဒယား ဆရာတော်ပီအဲဘရီဂေါ့အား ခြံရံလျက် ဆရာတော်လောင်း ပယ်ရ်ကိုတို အနောက်တော်မှ လိုက်ပါပြီး တရားဟော စင်မြင့်ပေါ်သို့ ကြွမြန်းလာခဲ့ကြသည်။ ဆရာတော်လောင်းသည် အသက်တော် ၃၉-နှစ်ရှိသည်။ မြန်မာပြည်၌ သာသနာပြု ရဟန်းဝါတော် (၇)နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ဆရာတော် ဘိသိတ်ပေး မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ပါဝင် တက်ရောက်ဝတ်ပြုကြသော ပရိတ်သတ်ကြီးမှာ နှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်နေကြသည်။ မိမိတို့အသက်နှင့် အမျှ ဤကဲ့သို့သော အခမ်းအနားကို ဤတကြိမ်သာလျှင် တွေ့ မြင်ဖူးကြသည်။ မြန်မာ ပထ၀ီမြေပေါ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ် ကျင်းပသော ဆရာတော် ဘိသိတ်ခံ အခမ်းအနားတခု ဖြစ်ခဲ့ပေသည်။
ယိုးဒယား စစ်သုံ့ပန်း ဆရာတော်ကြီး ပီအဲဘီဂေါ့သည် မြန်မာမင်း၏ ခွင့်ပြုချက်အရ ယိုးဒယားပြည်သို့ အေးချမ်းစွာ ပြန်လည် ကြွမြန်းသွားခဲ့သည်။ ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိ တတ်အပ် သေချာ မသိရှိသော အကြောင်းအရာတစုံတခုကို အလုံးအလျား အပြည့်အ၀ လက်ခံမှုကို ဆိုလိုသည်။ သို့သော် ထိုသို့ လက်ခံယူမှုသည် အကြောင်းတရား ဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့ လက်ခံယူခြင်း မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်တော်ထွက် ဖြစ်သော ဗျာဒိတ်တော်စကားကို အမှီအငြမ်း ပြု၍ လက်ခံယူခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘားရ်နားဘိုက် သာသနာပြုအဖွဲ့သည် ဤသို့သော ယုံကြည်ခြင်းတရားကို လက်ဆုပ် လက်ကိုင်ပြုလျက် မြန်မာပြည် သာသနာလုပ်ငန်းခွင်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မိမိတို့ မိခင်ဌာနချုပ်သည် မြန်မာပြည်၏ ကမ္ဘာ့အနောက်ဘက်ကြောခြမ်းတွင် တည်ရှိနေသည်။ အဆက်အသွယ် အသွားအလာ ပြုလုပ်ရန် ထိုခေတ် ထိုအခါက အလွန်ခဲယဉ်းလှသည်။ အကူအညီဟူ၍ကား သဲသောင်ပြင်၌ ခရီးသွားသူနှင့် တူ၏။ သို့သော် မိမိတို့သည် အထီးကျန် ဘ၀ခရီးကို လျှောက်လှမ်းကြသည် မဟုတ်ကြောင်း မိမိတို့ ယုံကြည်ခြင်းတရားမှ အစဉ် သတိပေး နှိုးဆော်နေ၏။ မိမိတို့ ယုံကြည် အားထားသော ထာဝရဘုရားသခင်၏ ခွန်အားကို အမှီသဟဲပြုသည်။ ဘုရားရှင်၏ ကြီးမားသော မေတ္တာရိပ် အ၀ါသအောက်တွင် ခိုလှုံ၏။ မိမိတို့ဘက်မှလည်း ထိုဝိညာဉ်ခွန်အား အသုံးပြုလျှက် မလျှော့သော ဇွဲလုံလဖြင့် တည်ကြည်သော ယုံကြည်ခြင်းတရားကို လက်ဆုပ်ကိုင်ပြုခါ အခက်အခဲဟူသမျှကို ကျော်လွှား တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်လျှက် ရှေ့သို့သာ ခရီးဆက်လာကြ၏။
"ငါသည် ကမ္ဘာကုန်ဆုံးသည်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့် အတူရှိမည်" (မာတေဦး၊၂၈း၂၀)
(၂၃) La Vita di Monsignor Percoto Fr.Michael Griffini .1728
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 9:18 PM